सदस्यता रद्द गर्नुहोस् ल्यान्डि Page पृष्ठ डिजाइन
मंगलवार, मार्च 11, 2008 मंगलवार, सेप्टेम्बर 29, 2020 Douglas Karr
म एक आकर्षक जबरजस्ती प्रस्ताव संग एक कम्पनीबाट एक जटिल कदम अभियान को सदस्यता लिएको थियो। ईमेल सादा टेक्स्ट थियो तर राम्रो प्रतिलिपि थियो। प्रत्येक चोटि मैले उनीहरूको साइटमा एक कार्य लिएँ, मैले मेरो गतिविधि (वा निष्क्रियता) मा आधारित विभिन्न सामग्रीहरू पाए। आज मैले राम्ररी लिखित ईमेल प्राप्त गरें तर मैले प्रस्ताव त्यागेर ईमेलबाट सदस्यता रद्द गर्ने निर्णय गरें।
यहाँ तिनीहरूले कसरी अलविदा भने:
आउच! यो पछाडिको सन्देश हो, "तपाईंले खेल्न छोड्नुभयो त्यसैले हामी अर्को शोषकमा छौं ... हेर्नुहोस्!"
केवल "हेर्नुहोस् या!" बिना।
तपाईंको सदस्यता रद्द लैंडि Page पृष्ठका लागि तीन कम्पोनेन्टहरू:
भूमिका-आधारित सदस्यताहरू - मास्टर सदस्यता समाप्तको सट्टा शीर्षकमा आधारित सदस्यता समाप्त गर्नुहोस्। यो सरल जस्तो हुन सक्छ, "तपाईंलाई यस ईमेल अभियानबाट सदस्यता हटाइएको छ, यहाँ केहि अन्य विषयहरू छन् जुन तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ:" अरूलाई अप्ट-इन गर्ने प्रस्तावको साथ। तपाईं यसलाई एक प्रोत्साहन टाई गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
सदस्यता रद्दको कारणहरू - सोध्नुहोस् किन! किन उनीहरू सदस्यता रद्द गरे? के यो धेरै धेरै ईमेलहरू थिए? अपुग? रुचि छैन? कुनै इ-मेल अभियान उत्तम छैन, कसरी तपाईं कसरी राम्रो गरीरहनुभएको छ भनेर सोध्नु हुन्न? उनीहरूलाई भाग लिनु भएकोमा धन्यवाद र माफी माग्नुहोस् यदि तिनीहरूले कारणलाई छान्छन् भन्छन्, "तपाइलाई चकनुहोस्!"।
थप प्रस्तावहरू - अन्य प्रस्तावहरूको लागि त्यो सबै पृष्ठ अचल सम्पत्ती प्रयोग गर्नुहोस्! यस व्यक्तिमा ठूलो सेतो खाली पृष्ठ नहेर्नुहोस्! तिनीहरू त्यहाँ रुचि र उद्देश्यको साथ एक समय वा अर्कोमा थिए (जब तिनीहरूले सदस्यता लिए)। किन तपाइँको भर्खरको उत्पादनहरू, सेवाहरू, ह्वाइटपेपर, आदि देखाउने छैन? सामाजिक प्रोफाईलहरू पछ्याउने बारे के?
जब मैले एक्स्ट्याक्टरेटको लागि काम गरें, मैले यस जेनेरिक उदाहरण प्रणाली-लागू (र मार्केटिंगले प्रतिलिपि र डिजाईन गर्‍यो)। पृष्ठसँग एक धन्यवाद छ, एकैक्टरेटको बारेमा एक ब्ल्ब, एक निजीकृत डेमो लि ,्क, साथै तिनीहरूको बाँकी साइटमा लिंकहरू!
कहिलेकाँही बिक्री सुरु हुन्छ जब ग्राहक वा सम्भावित ढोका बाहिर हिँड्दैछन्। तपाईंसँग स्थायी छाप पार्ने अवसर छ, यसलाई खाली पृष्ठको साथ नहेर्नुहोस्!
टैग: prectargetमास्टर सदस्यता रद्दसदस्यता हटाउने पृष्ठपृष्ठ सदस्यता रद्द गर्नुहोस्
मार्क्स 11, 2008 मा 1: 52 PM
मलाई अचम्म लाग्छ कि मेरो बुढ्यौली (तर वेब-सक्षम) हजुरबा हजुरआमाले कसरी "हटाइयो" (उनीहरूले कसरी सदस्यता रद्द गर्ने भनेर पत्ता लगाउन सक्छन् भनेर व्याख्या गर्न सक्छन्) केहि। इन्टरनेटबाट हटाइयो? तिनीहरूको उच्च गति जडानबाट हटाइयो? आफ्नो घरबाट हटाइयो? म केवल मद्दतको लागि तिनीहरूको हताश बिन्ती चित्रण गर्न सक्छु।
मार्क्स 11, 2008 मा 5: 59 PM
मलाई लाग्छ 'निभाएको' वा 'समाप्त' भन्नु भन्दा राम्रो छ। 🙂
मार्क्स 11, 2008 मा 4: 50 PM
डगलस, यो एक राम्रो टिप हो। मेरो सदस्यता रद्द गर्नु कुनै पनि हिसाबले नराम्रो होइन, तर यो पनि आकर्षक छैन। म सोध्छु किन तिनीहरूले सदस्यता रद्द गरे र पढ्नको लागि धन्यवाद।
तर मलाई लाग्छ कि तिनीहरूले के देख्छन् भनेर पृष्ठलाई पुन: भ्रमण गर्नु राम्रो विचार हो र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो सन्देश हो जुन तपाईंले तिनीहरूलाई छोड्न चाहनुहुन्छ।
मार्क्स 11, 2008 मा 8: 23 PM
मलाई लाग्छ "सुन्दर अलविदा पृष्ठ" ठीक छ। तर मसँग एक अनुमान छ यो व्यर्थ छ जबसम्म तपाइँ प्रयोगकर्तालाई जानकारीबाट सदस्यता रद्द गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सम्झाउनुहुन्न।
सामान्यतया, यदि कसैले अनसब्सक्राइब लिङ्कमा हिर्काउन कष्ट गर्छ भने, यो एक सम्पन्न सम्झौता हो।
जहाँसम्म प्रयोगकर्ताले किन सदस्यता खारेज गरिरहेको छ भनी सोध्ने संवादको रूपमा, म प्रयोगकर्ताले फारम भर्छ र उनीहरूले के भन्छन् भन्ने बारे केही ठोस तथ्याङ्कहरू हेर्न चाहन्छु।
व्यक्तिगत रूपमा, जब मैले मेरो इच्छाहरू पुष्टि गरिसकेपछि "तपाईं किन छोड्दै हुनुहुन्छ" बाकस वा पृष्ठ लोड हुन्छ ... मैले ब्राउजरको बन्द बटन थिच्नु अघि पृष्ठ लोड हुनको लागि पनि पर्खिन।
मार्क्स 11, 2008 मा 8: 50 PM
म सहमत छु कि सदस्यता रद्द गर्नु सम्भवतः एक सम्पन्न सम्झौता हो - मेरो बिन्दु यो हो कि तपाईले प्रयास गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ र व्यक्तिसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ साथै उनीहरूलाई वैकल्पिक उत्पादन वा सेवाहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
वास्तवमा, मलाई लाग्छ कि यो जस्तो पृष्ठ ह्यान्डल गर्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईको एनालिटिक्स प्याकेजको निगरानी गर्नु हो र सदस्यता रद्द गरेपछि कति जनाले अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भनेर हेर्नुहोस्!